Qarax kale oo ka dhacay Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Muqdisho (Keydmedia) - Qarax kale ayaa gilgilay Saacadihii ugu danbeeyay magaalada Muqdisho kaasi oo ka dhacay Nawaaxiga Suuq Bacaad degmada Yaaqshid.
Goobjoogiyaal ayaa sheegay in Qaraxa uu ahaa mid loo adeegsaday Gaari Kaarib ah islamarkaana laga soo buuxiyay Waxyaabaha Qarxa kaasi oo lala eegtay Fariisin Militeri oo ay Ciidamada dowladda ku leeyihiin Nawaaxiga Suuq Bacaad.
Wararka hordhaca ah ee kasoo baxaya Qaraxa ayaa sheegay in ugu yaraan 5 Qof ay ku dhaawacmeen kuwaasi oo isagu jira Ciidamo iyo dad Rayid ah,kuwaasi oo ka agdhowaa Goobta Qaraxa uu ka dhacay,waxaana Dhaawacyada la geeyay Isbitaalada muqdisho.
Guddoomiyaha Degmada Yaaqshiid Muxudiin Max’ed Xasan Jurus oo la xariirtay Keydmedia ayaa sheegay in Gaari Kaaribka ah uu qarxay kadib markii ay ogaadeen Ciidamada oo usuura gashay inay ka hortagaan.
Jurus ayaa waxa uu sidoo kale Keydmedia u sheegay in ay socdaan Baaritaanno islamarkaana Khasaaraha Qaraxa ay dib ugu warbixin doonaan Saxaafadda.